ElamaTaliyane - ALinks
January 17, 2022 IShubham Sharma ElamaTaliyane, ababaleki
Kwimeko apho ufuna ukufuna indawo yokukhosela okanye ukhuseleko lwamazwe ngamazwe e-Itali, eli nqaku liluncedo kuwe. Siwachazile amanyathelo ayimfuneko kunye nendawo yokufaka isicelo sokufuna indawo yokukhosela. Kwakhona, ekugqibeleni, sinike amakhonkco aluncedo. Njani
Ucwangcisa uhambo oluya e-Italiya? Ndwendwela ezonaKhenketho zibalulekileyo!
Disemba 1, 2021 UKaruna Chandna ElamaTaliyane, hamba
Ukutyelela i-Itali? Nazi ezinye zoKhenketho e-Itali. Akufanele uphoswe zezi zinto zinomtsalane. I-Itali yindawo yokuzalwa yoBukhosi baseRoma. Umtsalane ophambili e-Itali kubakhenkethi ayingabo bonke ubugcisa kunye nolwakhiwo. Ilizwe lisikelelekile ngoKhenketho lwendalo.
Ufumana njani umsebenzi e-Itali? Ezinye iingcebiso eziluncedo
Novemba 16, 2021 IShubham Sharma ElamaTaliyane, imisebenzi
I-Itali lilizwe laseYurophu elijikelezwe lulwandle nakwiziqithi ezininzi. Umsebenzi kunye nokuqesha e-Itali kuyanelisa kakhulu. Ukusebenza e-Itali, awuyi kujongana nengxaki kulwimi lwesiNgesi. IsiNgesi sihlala sisetyenziswa kwi
Uyivula njani iAkhawunti yeBhanki e-Itali?
Septemba 19, 2021 UAntika Kumari ElamaTaliyane, imali
Ukufudukela kwelinye ilizwe kunokuba yinto enomdla, kodwa akukho ngaphandle kwemiceli mngeni. Mhlawumbi kufuneka ufunde ulwimi olutsha, ufumane ikhaya elitsha okanye unentaba yeefom ozigcwalisayo… ungasathethi ke ngezo bhokisi
Indlela yokufumana i-visa eItali?
Novemba 9, 2020 IShubham Sharma ElamaTaliyane, ivisa
Uqoqosho lwesixhenxe ngobukhulu emhlabeni, iRiphabhlikhi yase-Itali, ikwintliziyo yoLwandle lweMeditera. Ivele kubukhosi baseRoma, obabungobunye bobukhosi obukhulu baseYurophu obakha bakho. Ngenxa yoko, baninzi
I-visa yase-Itali yamaIndiya
Oktobha 19, 2020 UMaitri Jha ElamaTaliyane, ivisa
ERoma, eFlorence, eVenice, eMilan. I-Itali yindawo ekuyiwa kuyo njengakwezinye iindawo. Inezixeko ezininzi ezintle ezisitha okulandelayo. Konke kulapha kubakhenkethi ukonwabela ubugcisa, umculo, uyilo, ifashoni, iivenkile kunye nokutya. Enye yezona ziphezulu
I-visa yabakhenkethi base-Italiya yabemi baseIndiya
Oktobha 6, 2020 UMaitri Jha ElamaTaliyane, ivisa
Ngaba wakhe wafuna ukubona umzobo wokuqala kaDa Vinci? Isidlo sangokuhlwa sokugqibela okanye uBotticelli Ukuzalwa kukaVenus? Kuthiwani ngemidwebo eyaziwayo kaMichelangelo kwiSistine Chapel? Lixesha lokuba 'Ciao' uye e-Itali ukuba uyanqwala
Yazi Elona Xesha liLungileyo lokutyelela i-Italiya !!
Juni 11, 2020 UKaruna Chandna ElamaTaliyane, hamba
Imiswe kwiYurophu, ilizwe eline-boot. Yenye yezona ndawo zidume kakhulu kwihlabathi. Oko kuyathandwa ngezizathu ezahlukeneyo. Ukubandakanya ubugcisa, iijelile, iidolophu ezichwayitileyo, iindawo ezintle zomhlaba, abantu abanomdla kunye nokutya okumgangatho ophezulu. I-Itali ibonelela nge